ALL OO KU SAABSAN DARYEELKA IYO BEERITAANKA OF CURRANTS CAS - CURRANT CAS
Currant casriga ah waa geed cagaar ah oo ka soo jeeda qoyskii miisaanka. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad ka saarto jirka oo dhan oo dhan, ka tago oo kaliya qaybaha raadinta lagama maarmaanka u ah hawlaha caadiga ah ee jirka.
Red Currant Noocyo
Currant casaan ah ayaa muddo dheer jeclaa by bannaanka u badan, waxaa la soo bixiyay noocyo badan oo kala duwan.
Ma taqaanaa? Waxaa la rumaysan yahay in currant cas oo ka soo degay currant duurjoogta, taas oo ku baahsan Carpathians iyo guud ahaan Ruushka.
Noocyada ugu badan ee currant cas ayaa awood u leh inay si madaxbanaan u xidhaan berry leh iyada oo ay u gaar ah manka. Awoodahan, thanks thanks kaas oo currant ayaa helay caan ka mid ah jecel yihiin miro iyo berry dalagyada.
Fasalada ugu fiican ee currant cas ayaa loo qaybiyaa:
Noocyo Bisaylkiisa hore
Mid ka mid ah noocyada currant ugu wanaagsan ee casaanka leh Bisaylkiisa hore waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay Pearl Pinkl. Kala duwan tani waxay leedahay macmacaan jilicsan, dhadhan aad u macaan. Bushka currant wax yar ayuu ku faafaa, halkii dheer. Miraha waa yar yihiin, awood u leh inay laalaadaan laanta wakhti dheer oo aan ka sii darin. "Pear Pearl" waxay u diirisaa si fiican miro.
Mid kale oo ka mid ah wakiilada ugu quruxda badan ee kala duwan hore ayaa loo tixgeliyaa currant "Cascade". Booska wuxuu galaa noocyo waaweyn oo ah currant cas. Miisaanka Berry 1.5 g, dhadhanka ah ee currants waa macaan iyo dhanaan, oo leh burush dheer, qiyaastii 10 cm. Kala duwan waa la nadiifiyey ee Maraykanka, waxaa ku dhowaad ma saameyn cudurada fangas iyo si joogto ah siinayaa goosashada wanaagsan.
Noocyada kala duwan ee muddada dhexe
Xidid aad u wanaagsan wuxuu siinayaa noocyo badan oo Bisaylkiisa dhexdhexaad ah "Ilyinka". Kala duwan ayaa leh midab, midho weyn, miisaanka kaas oo ah 1.6 g. Berry wuxuu leeyahay dhadhan macaan oo macaan. Kala duwan tani waxay leedahay dhalid aad u sarreeya, qiyaastii 5 kg halkii baadiyaha. Lacagtu waxay u adkeysanayaan fangaska, laakiin mararka qaarkood waxaa soo weerara cayayaanka.
Kala duwan oo kale oo leh dhexdhexaad dhexdhexaad ah - "Gacaliye." Waxa uu u muuqday dhawaan, laakiin si deg deg ah ku guuleystay beerta iyo bannaanka u. Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee kala duwan waxaa ka mid ah wax-soo-saarka wanaagsan. Laga soo bilaabo hal baadiyaha waxay ururin karaan ilaa 12 kg oo ah nooca berry ah. Sida ku jirta "Il'inka", "Gacaliye" wuxuu leeyahay difaac heer sare ah ee cudurada fungal, waxana uu u dulqaadanayaa xilliga jiilaalka si fiican.
Noocyada Bisaylkiisa dambe
Wakiilada ugu caansan ee noocyada dambe ee dhirta dhirta waxaa ka mid ah "Laangooska Dutch" iyo "Ronde".
"Laanqayrta Casaan" - Tani waa noocyo kala duwan oo reer galbeed ah. Waa duurka sare ee dhirta, dhererkiisu waa dhexdhexaad. Burushyada qiyaastii 8 cm, mid walbana ilaa 15 berry. The berry yihiin dhalaalaya, casaan, halkii weyn. Darajada waxaa loo tixgeliyaa midho iyo baraf u adkaysta.
"Ronde" - sidoo kale wakiil ka socda taranta shisheeye. Daaqadaha waa dherer dhexdhexaad ah, si adag u duuban, laamood oo xoog leh leh caleemo. Burushka mudada dheer wuxuu hayn karaa ilaa 20 berry. Berry waa weyn, cas, oo leh dhadhan raaxo wacan. Kala duwan oo leh dhalid aad u sarreeya, jiilaal-adag, waxay la qabsan karaan xaalad kasta oo carrada iyo cimilada, waxay leedahay xummado wanaagsan oo cudurro kala duwan ah.
Roobin currants cas
Qodobbada waxtarka leh ee currant casaanka iyo dhadhankiisa dhalaalaya waxay ka dhigaysaa milkiilayaasha dhulka inay koraan dalalkooda. Si kastaba ha ahaatee, si aad u hesho goosashada wanaagsan, geedka waa in si fiican loo beeray. Ku saabsan sida loo abuuro currants cas, ha aynu hadalno.
Goorta iyo meesha lagu beeray currants cas
Marka aad dooranayso qorshe ah currants, waxaad u baahan tahay inaad xasuusnaato in currants jecel yahay iftiin badan. Kalluunka qiimaha badan waa koonfurta-galbeedka iyo kuwa koonfureed, iyo haddii uu jiro khiyaamo yar, guud ahaan waa qumman yahay. Xalka wanaagsan wuxuu noqon karaa in la beero duurka meel u dhow xayndaabka, laakiin la siiyay in goobta ay si wanaagsan u iftiimayso. Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad xasuusato nooca carrada sida currants; waxay u baahan tahay qoyaan badan, sidaas darteed waxaad u baahan tahay inaad siiso biyo ku filan.
Waa muhiim! Waqtiga ugu wanaagsan ee lagu beerayo currants cas waa xilliga dayrta.
Currants waxaa lagu beeray caawimo geedo. Ugu wanaagsan oo dhan, waxay ka jari kartaa geedo laba sano jir ah. Geedo currant ah oo laga helo kaas oo baadiyaha wanaagsan ay koraan waa inay lahaadaan ugu yaraan saddex xididood oo la ruxay. Haddii aad ku iibsato seedling dheriga, laakiin isma samee, iska hubso inaad ka saarto dheriga oo hubi nidaamka asaasiga ah.
Bacriminta iyo waraabinta ciidda ka hor beerashada
Waa lagama maarmaan in la tixgeliyo nooca carrada lagu beeray. Waxaa fiican inaad si taxadar leh u fekerto oo aad go'aansato meesha ay ka wanaagsan tahay in lagu beero currants casaan ah goobta. Kallaan ay lacag u jecelyihiin ciidda loamy fractions. Ma jecla ciidda currant leh content sare ee nijaasta alkolada kala duwan. Ciidankan ayaa si fudud u gubi doona xididada, taas oo horseedi doonta dhimashada geedka.
Si loo baadho baadiyaha, waxaad u baahan tahay inaad qodo dalool toddobaad gudihiis. Tani waxaa loo sameeyaa si loo hubiyo in dhulka uu haysto waqti uu dego, iyo dheecaanku meesha ku dhacay. Baaxadda godadka waa inay ahaataa qiyaastii nus mitir, qoto dheer oo qiyaastii ah 40 cm. Qeybta hoose ee ceelku waxay jiifaan dheecaan, tusaale ahaan, dhagaxyada yaryar, ka dibna compost, taas oo quudin doona seedling. Haddii uu jiro rabitaan iyo suurtagal, markaa waxaad ku dari kartaa superphosphate leh sulfate potassium ee saamiga 1: 2, siday u kala horreeyaan.
Daryeel qaran ee currants cas
Inkasta oo baadiyaha currant sii kordhaya, waxaad u baahan tahay inaad si joogto ah u daryeesho. Waxaa lagama maarmaan ah in bacrimiya ciidda, ka takhalusi haramaha, haddii ay jirto baahi loo qabo in la taageero laamaha geedaha.
Si ay currant u koraan iyo si fiican u horumariyaan, ciidda agagaarka warshadda waa in lagu hayaa si joogto ah qoyan iyo nadiif ah haramaha. Waxaa lagama maarmaan ah in si fiican loo daboolo ciidda si qoto dheer u ah 10 cm, waa in waxqabadka noocan oo kale ah la sameeyo ugu yaraan 20kii maalmoodba mar.
Xilliga dayrta, dhulka dhulka hoostiisa ah waa in lagu qodaa 15 cm agagaarka wareegga baadiyaha.
Waraabinta iyo mulch
Currant cas oo jecel qoyaanka. Xididdada duurka waxay ku dhowdahay meel ku dhow dusheeda oo ma siin karto fursad qoyaan nafaqo leh oo ka yimaada biyaha dhulka. Haddii ay dhacdo biyo yaraan, geedku wuxuu si tartiib ah u qalajin doonaa, hoos u dhigi doonaa oo si degdeg ah u burburin doonaa.
Ma taqaanaa? Haddii aad dhulka ku dhejisid arrimo dabiici ah, ka dibna dabacsanaan ayaa loo dhaqmi karaa marar badan.
Waxaad kaloo u baahan tahay inaad isticmaasho mulch. Habka ugu fiican waa in la isku daro 50 g oo ah ash soodhaha ah, 50 g oo saabuun ah oo iyaga ku milmi 10 litir oo biyo kulul. Ciidda ka yar baadiyaha waxaa lagu dabooli karaa lakabka caleemaha, cawska, peat iyo hay. Daryeelka currants guduud guga waa in lagu daboolo dhulka la wargeyska haddii burooyinkoodii hore u baro. Wargeysyada waa laga saari karaa marka ubaxu bilaabmayo, sida inta lagu jiro muddadan cayayaanka faa'iido leh waxay bilaabaan inay ka soo baxaan dhulka.
Manjooyin habboon iyo sameyska baadiyaha
Abuurista manjooyin waa xaaladda ugu muhiimsan ee wanaagsan oo horumar leh oo ka yimaada baadiyaha currant cas. Marka ugu horeysa baadiyaha u baahan tahay in la jarjiro ka dib markii ay soo degaan. Iska yaree qiyaastii kala badh xayndaab kasta, laakin hubi inaad badbaadiso ugu yaraan 4 kobcood oo lagu soo saaro buro kasta. Ku celi nidaamkan saddexda sano ee soo socota. Sannad kasta waxaad u baahan doontaa inaad gooysid laamaha jirran, bukaanka ama aad u badan.
Waa muhiim! Manjooyin rasmi ah ayaa la joojin karaa sannadka afraad kaddib marka la beerto. Waqtigaan, dhirta horayba waa loo aasaasay waxaana lagu helayaa caleemaha horumaray.
Hababka dhalmada ee currant cas
Waxaa fiican in la bilaabo dhalashada currants guga hore, xitaa ka hor inta aan ubbooyinku bilaabaan inay Bloom. Nasiib darro, dad yar ayaa garanaya sida loola midoobo gaduudka cas, badiyaa waxay sameeyaan khaladaadka, sababtoo ah kuwan dakhligoodu uguma jaro meelo cusub. Lacagaha waxaa lagu faafin karaa:
Si ay u awoodaan in ay dacaayad currants leh abuur ah, waxaa lagama maarmaan ah in la xiro buraashka ugu wanaagsan ee baadiyaha leh muslin iyo ka tago ilaa ilaa koray buuxda. Waqti dheeraad ah ee berry ku dheggan baadiyaha, si fiican u noqon doonaa. Marka berry ay si buuxda u bislaadaan, ku rid on daaqad cadceeda. Marka qashirku bilaabo inuu waxyeello, ku qaso ciid nadiif ah, biyo raaci oo qallalan. Abuurtaan berry ee sariirta ee biqilka, sano ka dib ku tallaalida meel joogto ah ee koritaanka currant.
Guntinta lignified iyo cagaaran
Kallocada caleenta cagaaran waxay soo saartaa guntinta quruxda badan ee cagaaran iyo kuwa cagaaran oo badanaa la googooyaa dhamaadka xagaaga. Dabayaaqadii Agoosto, marka ay burooyinku si fiican u horumareen, iyo dushooda caleemaha ayaa qaangaadhay, waa la gooyaa isu tallaalidda. Tani, caleemaha si fiican u qumman ilaa 4 sano jir ayaa ku haboon. Caleemaha waxaa loo kala qaybiyaa guntooda 18 cm oo dherer iyo si toos ah loo beeray maalinta goosashada. Kelyaha waa in la diyaariyaa horay, si fiican u waraabiyey oo qoday. Geedka qoyaanku waa inuu ahaadaa sida 1-2 burooyinkuna ay ku sii jeedaan dusha sare, masaafada u dhexeysa gooyntu waa inay ahaataa ilaa 20 cm.
Lakabka currant wuxuu bilaabmaa guga hore. Wixii dalaggu wuxuu doortaa noocyo badan oo heer sare ah. Waxaa jira saddex nooc oo qaabeyn ah:
Horizontal. Si natiijo wanaagsan, u qaado caleemaha sannadlaha ah ee si wanaagsan loo horumariyey oo soo baxa saldhigga baadiyaha. Marka caleemaha koraan on laamaha sida, waxay ku daboolan yihiin dhulka qoyan iyo dabacsan, waxaa muhiim ah in ka tago dushooda bilaash ah ka rusheeyaa. Kadib bil gudaheed, hababka waa in lagu celiyaa. Xilliga dayrta, waaxyadahaan waxay qodayaan, jaraan saldhiga oo googooyaa. Lakabada leh xidid si wanaagsan loo horumariyey ayaa loo isticmaalaa beeritaanka, iyo haddii nidaamka xididku uu liitay horumar, sanadka kale ayaa laga tagayaa.
Arc-qaabeeya. Goobta ku dhow, god ayaa lagu qodaa si qoto dheer ah 20 cm. Laamaha waaweyn waxaa lagu riixaa hoose ee godka waxayna ku shubtay baaldi biyo ah, ka dib markii ay isla markiiba buuxsamaan bacrin, dabacsan. Laan kasta, oo sidan oo kale ah, waxa uu noqonayaa dhirbaaxo buuxda xilliga dayrta.
Qod. Guga hore, baadiyaha waxaa la gooyaa asalka, oo ka tago kaliya gaaban 2-3 cm, ka dibna, caleemaha dhalinyarada badan ayaa kori doona salka duurka. Marka ay koraan illaa 20 cm, waxay si fiican u waraabin jireen dhulka kala badh. By dayrta, guntooda u baahan tahay in laga soocaa baadiyaha weyn iyo transplanted.
Kala qaybinta keynta currant macnaheedu waa kala-wareejinta baadiyaha meel cusub. Burburkii hore ayaa si buuxda loo qoday, jarjar si qayb kasta u leeyihiin xididada. Wixii beeridda cayayaanka cusub ee cayayaanka. Qeybo cusub oo baadiyaha ah ayaa lagu beeray meel joogto ah, oo afkuna waxay u baahan yihiin in la yareeyo hoosta si ay u oggolaadaan koboca dhalinyarada inay horumaraan. Tani waa habka ugu fudud, laakiin ugu xun. Kala soocidda duurka waa wax beerto oo xun.
Boqortooyada Casaanka ah ayaa si xaq ah loo yiraahdo berrinka caafimaadka. Waxay ka kooban tahay xaddi badan oo sonkor ah, asiidh, kakamiin fitamiino E, A, C, noocyo kala duwan oo nitrogenous ah iyo walxaha pectic, birta, potassium, selenium, malic iyo succinic acid. Currant waa antioxidant aad u fiican, waxaa lagula talinayaa inaad cuntada ku qaadato si looga hortago dhacdada kansarka.
Cilmi-baadhayaasha ka kala socda dalal kala duwan waxay sameeyeen daraasado badan oo kala duwan oo leh currants cas. Marka loo eego natiijooyinka shaqadooda, waxaa lagu soo gabagabeyn karaa in currants casaanka ah ay ku jiraan coumarins iyo furocoumarins, kuwaas oo leh saameyn aad u fiican iyo saameynta antitumor.
Qalabka khatarta ah ee currant cas
Laakiin inkastoo dhammaan noocyada nafaqooyinka ee currant cas, weli waxay leedahay contraindications. Lacagta cagaaran ayaa si xad dhaaf ah looga hortagaa xaalad cagaarshow, xanuunka qandhada daran, boogaha duodada iyo boogaha caloosha. Lacagta cas waxay dhaawici kartaa dadka qaba hurgun dhiig yar.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Currant cas 2019